လပ်ြရြားမြယူကရိန်းမှာရုံးဖွင့်လှစ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
11 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 38 ယူကရိန်း, ဥရောပ, လောက, အထွေထွေ, Advertising ကြော်ငြာ (Advertorial) 0
နည်းပညာ, ဦးဆောင်ယင်း၏ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းများနှင့်သာလွန်ဝန်ဆောင်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူကဏ္ဍတွင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယူကရိန်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာ၏ရူပါရုံ၏မူဘောင်နိုင်ငံတကာရုံးများနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးလပ်ြရြားမြစီမံကိန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအင်ဂျင်နီယာ, သူကဆက်ပြောသည်။
ထက်ပိုမိုတစ်နှစ် 60 မိုးသည်းထန်စွာရုတ်သိမ်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ကုမ္ပဏီစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကလပ်ြရြားမြ, ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဆီသို့ခေါ်ဆောင်သွားအသစ်တစ်ခုအရေးကြီးသောခြေလှမ်းဤအချိန်တွင်ယူကရိန်းအတွက်ရုံးဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြည့်စွက်။ motion, ရိန်းနှင့်အတူသစ်တစ်ခုရုံးကိယက်ဗ်, ယူကရိန်း, မိုးသည်းထန်စွာရုတ်သိမ်း, မိုးသည်းထန်စွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, လေတိုက်တာဘိုင်တပ်ဆင်ခြင်း, ဘာသာရပ်အတွက်လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုစည်းဝေးပွဲကိုအတှေ့အကွုံအတွက်စတင်ယူကရိနျးစျေးကွက်မှဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာ၏သာလွန်စံချိန်စံညွှန်းများသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
တခုအကဲဖြတ်စီမံကိန်းတွင်ပြဿနာနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးအင်ဂျင်နီယာအထွေထွေမန်နေဂျာ Engineering Kuzucu အပေါ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်: "နှစ်ပေါင်းများစွာကျနော်တို့တူရကီနှင့်ပြင်ပမှာနှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးသောစီမံကိန်းများကိုထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကရုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ယူကရိန်းရာအရပျကိုယူပြီးအကြီးစားစီမံကိန်းများတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုထင်ဟပ်။ ဒီသဘောနဲ့, ယူကရိနျးဈေးကွက်ထဲမှာကြီးမားတဲ့ကွာဟမှုရှိပါတယ်။ သိပ်အကြီးစားစီမံကိန်းများကိုအဘို့အမြင့်မားစွမ်းရည်ပစ္စည်းကိရိယာများဘို့လိုအပ်ကြောင်း။ ငါတို့သည်လည်း Motion ၌အကြှနျုပျတို့၏မြင့်မားသောစွမ်းရည်နှင့်ခိုင်ခံ့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦများကဤလိုအပ်ချက်များ turnkey ဖြေရှင်းချက်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်ရှိသည်။ ယူကရိနျးစျေးကွက်အပေါ် EPC ကန်ထရိုက်တာ, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူများ, လေနှင့်စွမ်းအင် (ပါဝါ) ထုတ်လုပ်သူကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောစက်မှုကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများအစေခံရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ "
တရုတ်နိုင်ငံတွင် CSR Zhuzhou လျှပ်စစ်စက်ခေါင်းမြေအောက်ကားများထုတ်လုပ်, တူရကီ Izmir အတွက်ရုံးဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ် 25 / 09 / 2012 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်တူရကီနိုင်ငံတရုတ် CSR Zhuzhou လျှပ်စစ်စက်ခေါင်း၏ search ၌တည်သော Izmir ရဲ့အသစ်မက်ထရိုဘူတာရုံများတွင်အသုံးပြုမော်တော်ကားထုတ်လုပ်, တူရကီ Izmir အတွက်ရုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Izmir နှင့်အထူးသဖြင့်တူရကီအတွက်တူရကီအတွက်မြို့ပြမြူနီစီပယ်၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်တရုတ်ရထားလမ်းကုမ္ပဏီကြီး, တူရကီအတွက် Izmir မှဤဆုံးဖြတ်ချက်ရလဒ်များအားလုံးစစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။ အစ်ဂျီးယန်းဒေသအတွက်, Izmir ၏ဗဟိုစေရန် Partners ရှာနေတရုတ်ကုမ္ပဏီများရင်းနှီးမြှုပ်နှံရှေ့ဆက်လာဖြစ်လျက်ရှိအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 500 သန်းတရုတ် Izmir ဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်ကိုဆွဲဆောင်ရန်, တူရကီနှင့် Bursa ယှဉ်ပြိုင်မြို့ကြီးများဖြစ်ကြသည်။ Izmir Metro တရုတ်နိုင်ငံသို့ကားများ 33 32 ယူရိုသန်းများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ...
ယူကရိန်း Maisonette Wagon ထုတ်လုပ်! ပစ်မှတ် 2013 04 / 01 / 2012 ယူကရိန်းနှစ်ခုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာကားများထုတ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Korrespondent အဆိုအရKremançukအတွက် (Poltava ဒေသ) Kryukovskiy Wagon စက်ရုံအဆိုပါရထားလမ်းယူကရိန်းနှစ်ခုထပ်လှည်းထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သိရသည်။ အစီရင်ခံစာအရသိရသည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုထပ်ထဲကလှည်းများအတွက်öngörülernနေ့စွဲ 2013 တစ်နှစ်။ နိုင်ငံပေါင်းလှည်း Wagon စက်ရုံတင်ပို့ 20 Kryukovsky, အ CIS ဒေသအတွက်ကုန်စည်နှင့်ခရီးသည်လှည်းကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းထုတ်လုပ်တစ်ခုတည်းသောစက်ရုံအဖြစ်လူသိများသည်။ 2011 အားဖြင့် Ukrzaliznits (ယူကရိန်းမီးရထား) ဟာနှစ်ထပ်ရထားပို့ဆောင်ရေး Vagonka Skoda ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကနေတင်ဒါအနိုင်ရဖွင့်လှစ်။ Skoda Vagonka ကထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်တိုတောင်းသောအကွာအဝေးကျော်ကဤရထားများအသုံးပြုခြင်းမည်ဟုယူဆသည်။ ရင်းမြစ်: Korrespondent
ယူရို 2012 17 စဉ်အတွင်းယူကရိန်းနှင့်ပိုလန်ရထားပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ် 11 / 01 / 2012 -2012 ယူရိုဘောလုံးပြိုင်ပွဲချန်ပီယံနှစ်နိုင်ငံအကြားရောက်ရှိရထားလမ်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်ယူကရိန်းနှင့်ပိုလန်တို့ကပူးတွဲဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မည်။ တစ်နေ့လျှင် 17 ရထားနှစ်နိုင်ငံအကြားကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ပိုလနျမီးရထားဒါရိုက်တာ Yanus Malinovskiy ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်: "ကျနော်တို့ရထား 17 နေ့စဉ်ယူကရိန်းသွားကြဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းချန်ပီယံစဉ်အတွင်းသူတို့အများစု Dorogusk များမှာ - Yagodin (VOLINSK တိုင်းဒေသကြီး) နှင့်Peremışl-Mostiska (ငြိမ်းချမ်းရေး Lviv ဒေသကြီး) နယ်စပ်မီးရထားအားဖြင့်စစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့် ပတ်သက်.9တထောင်ခရီးသည်ဖြတ်သန်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြောင်းရွှေ့ခံရနိုင်ပါတယ် "လို့သူကပြောပါတယ်။ ဥရောပဘောလုံးချန်ပီယံရှစ်များအတွက်မီးရထားလက်မှတ်လက်မှတ်တွေ3လ Pre-ရောင်းချခြင်းမှထမွောကျရန်မျှော်လင့်နေသည်။ ရင်းမြစ်: ငါ့အ http://www.timeturk.co
ယူကရိန်းမီးရထား restructured ရပါမည် 03 / 04 / 2012 ယူကရိနျးအစိုးရအားဖြင့်ဒီနှစ်ကုန်မှာယူကရိန်းဘဝကိုခံယူမဟုတ် hadafleniy အဆိုပါရထားလမ်းတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဗစ်တာ Yanukovych နှင့်အညီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်းယူကရိန်းမီးရထားမတ်လလများအတွက်အစီအစဉ်များကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အမျိုးသားမီးရထားကုမ္ပဏီပြည်နယ်ဥဇ 100% နှုန်းကိုကပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီများကအခြေခံအဆောက်အဦများစီမံခန့်ခွဲမှု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ, ခရီးဝေးနှင့်နိုင်ငံတကာခရီးသည်ရထားပေါင်းစည်းထားသော, ဆင်ခြေဖုံးနှင့်ဒေသတွင်းခရီးသည်တင်ရထား, ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ, ရထားလမ်းပြုပြင်, သုတေသနနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်များနိုင်ငံတော်ကယူဆလိမ့်မည်။ ရင်းမြစ်: raillynews
ယူကရိန်းဗိုက်ကင်းရထားလမ်းစီမံကိန်းကို join ဖို့အဇာဘိုင်ဂျန်အဆိုတင်သွင်း 10 / 04 / 2012 ယူကရိန်း Mykola Azarov သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန, ပင်လယ်နက်နှင့်ဘောလ်တစ်ပင်လယ်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်္ကြံ (ဗိုက်ကင်းစီမံကိန်း) ၏ CMU ဝန်ကြီးချုပ်၏အတွင်းဝန်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အဇာဘိုင်ဂျန်ကိုဖိတ်ကြားထားသည်။ အဆိုပါကြေညာချက် Mykola Azarov အဇာဘိုင်ဂျန် 's သူတို့ကဒီစင်္ကြံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေလိုပြောသည်။ သူတို့ Azarov ဗဟိုအာရှနှင့်ဘောလ်တစ်တိုင်းပြည်များအကြားရထားလမ်း၏ပြဌာန်းချက်၏အကျိုးကျေးဇူးများ၏မိနျ့တျောမူအဆိုပါစင်္ကြံ၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုဆက်လက်ချင်ကြောင်း။ ရင်းမြစ်: Raillynews
တရုတ်နိုင်ငံတွင် CSR Zhuzhou လျှပ်စစ်စက်ခေါင်းမြေအောက်ကားများထုတ်လုပ်, တူရကီ Izmir အတွက်ရုံးဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်
ယူရို 2012 17 စဉ်အတွင်းယူကရိန်းနှင့်ပိုလန်ရထားပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်
ယူကရိန်းမီးရထား restructured ရပါမည်
ယူကရိန်းဗိုက်ကင်းရထားလမ်းစီမံကိန်းကို join ဖို့အဇာဘိုင်ဂျန်အဆိုတင်သွင်း
ရုရှားယူကရိနျးရထားလက်မှတ်တွေကြိုတင် 60 ရက်ပေါင်းကိုရောင်းပါလိမ့်မည်
ယူကရိန်း - ရုရှားရထားလမ်းခရီးစဉ်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်